Home Ulo oru Europe Clement Lenglet Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Untold Biography
Clement Lenglet Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Untold Biography. Ebe e si nweta WTFoot na Facebook
LB na-enye akụkọ zuru oke nke Football Genius na aha ya "Lenglet“. Anyị Clement Lenglet Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama sitere na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Akụkọ Clement Lenglet nwata - Nyocha rue ụbọchị. Ebe e si nweta ya FC Barcelona na alchetron
Nchịkọta ahụ metụtara ndụ ya mbụ, nzụlite ezinụlọ, agụmakwụkwọ / ịkọ ọrụ, mmalite ọrụ ndụ ya, ụzọ maka akụkọ ama ama, ibilite n’akụkọ a ma ama, mmekọrịta, ndụ onwe onye, ​​ndụ ya na ndụ ezinụlọ wdg.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ nọ na-atụ anya ogologo oge maka FC Barcelona, ​​onye agbachitere nke nwere ike karịa ijikwa ndị na-alụ ọgụ anụ ahụ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Clement Lenglet nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Clement Lenglet Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Agụghị Ọmụmụ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Malite, aha ya zuru ezu bụ Clement Nicolas Laurent Lenglet. A mụrụ Clement na ụbọchị 17 nke June 1995 ka nna ya Sébastien na nne ya na-amaghị aha ha n'obodo Beauvais, France.
Ulo Clement Lenglet bu ndi Beauvaisiens ha buru kwa ndi sitere na Beauvais. Nke a bụ obodo dị na mgbago ugwu France nke dị ihe dịka 75 kilomita site na Paris. Beauvais bụ ụlọ Beauvais Katidral, otu n'ime katidral ụlọ ụka mara mma kachasị mma n'ụwa nke nwere ụkpụrụ ụlọ Gothic (ụdị nke gbagoro na Europe n'oge Ọgbọ Etiti na Oge Ikpeazụ).
Clement Lenglet Family Origin- O si Beauvais, obodo ama ama maka katidral ya. Ebe E Si Nweta ka RailEurope
A zụlitere Clement Lenglet n’ezinaụlọ ndị otu Kristi. Ọ bụ nwa mbụ n'ime ụmụnne ndị ọzọ nke 3 (nke dị n'okpuru ebe a) amụrụ nne na nna ya. Clement toro na ụmụnne ya nwanyị abụọ nke obere nke afọ-ọdịghị ka nke ahụ.
Onye na-eto eto Clément Lenglet sere onyinyo ya na ụmụnne ya. Ebe e si nweta ya Boursorama
Na-ekpebi site na foto ahụ, ị ​​ga-amata na ụmụnne atọ ahụ mechara nwee nwanne nwoke nke a maara na ọ bụ nwa nke ezinụlọ Lenglet.
Mgbe ọ bụ nwata, nna nna ya Sebastian Lenglet kpọpụrụ ezinụlọ ya n'obodo Beauvais iji gaa biri na Jouy-sous-Thelle, bụ Commune na ngalaba Oise dị na mgbago ugwu France. Ọ bụ na Jouy-sous-Thelle Clement buliri mmasị na football.
Clement Lenglet Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Agụghị Ọmụmụ - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Site n'oge ọ bụ nwata, Clement nwere ihe mgbaru ọsọ nke ịbụ ọkachamara n'egwuregwu ịgba bọl. Ọ dị iche na ụmụaka ndị ọzọ na Jouy-sous-Thelle onye nwekwara ochicho obi di otua. Ihe mere ya jiri dị iche bụ na ọ hụrụ na ọchịchọ ahụ bụ mmalite nke mgba. Kama ịga hụ ndị enyi ya ma ọ bụ rapara na PS (PlayStation), Lenglet ga-ahọrọ ịnọnyere nna ya na nwanne nna ya. Ha bụ ndị ọzụzụ izizi mbụ ya.
Nwe Clement Lenglet dị gara gara maka nna, ọ dị mfe ịnweta nkwado niile achọrọ iji tọọ ntọala ọrụ ya. Ọpụpụ n'ogige football ezinụlọ ya, Clement Lenglet onye dị afọ anọ n'oge ahụ malitere asọmpi ya na ụmụaka ụmụaka asaa. Enyere ya nọmba 10 uwe n'ihi na o nwere ikike karịa ndị ọzọ n'agbanyeghị na ọ pere mpe.
Clement Lenglet Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Agụghị Ọmụmụ - Ndụ Ndụ Mmalite
Otu afọ ka e mesịrị mgbe ọ dị afọ 5, Lenglet malitere ịga ule na ụlọ akwụkwọ kọleji dị nso. O meriri ọnwụnwa ya na Montchevreuil FC, obere klọb dị na obere French French nke Oise dị nso na ụlọ ezinụlọ ya. Thebịaru nso bụ ihe mere nne na nna ya ji kwere ka ọ sonye na klọb.
Clement maara ihe ọ chọrọ ozugbo site na mgbe ọ sonyere Montchevreuil dịka otu n'ime ndị enyi nwata ya, Matthieu Quesmel bụ onye ha gbakọrọ ọnụ na klọb (2001-2007). Ọ nọ n'etiti ụmụaka ndị ọzọ enyerela ezigbo ụkpụrụ egwuregwu bọọlụ chọrọ ka ha bido akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ha.
Clement Lenglet Early ya na onye na - ahụ maka egwuregwu bọọlụ- N'ebe a, ọ na - esoro ndị egwuregwu egwu ibe ya. Ekele diri IG
Mkpebi Clement Lenglet nwere ihe ịga nke ọma mere ka ọ sonyere klọb ọzọ akpọrọ Chantilly. Ọ bụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nke megoro aha ọma maka ọzụzụ na ịchọpụta talent ndị ntorobịa na France. Mgbe ọ sonyere, Lenglet hụrụ klọb ahụ inwe Kevin Gamero na kpakpando gụsịrị akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme ha.
Onye na-eto eto nke Lenglet na Chantilly, Sylvain Dorard gbanwere ya n'aka ekpe mgbe ọ bịarutere na klọb. Afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, ọ gbanwere, oge a ka ọ bụrụ onye agbachitere etiti. Clement Lenglet bidoro ịgbaso nzọụkwụ nke Kevin Gameiro. O nyeere ndị otu ya aka obere ka ha merie iko nke mbụ ya.
Clement Lenglet sere onyinyo n'akụkụ onye na-akwado ya ma nwee mgba. Ekele diri IG
Clement Lenglet Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Agụghị Ọmụmụ - Akpanwu akwukwo akuko
Ebe ọ bụ na mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ mbụ, Clement Lenglet malitere ịtụle ime ka agụụ ịchọrọ bụrụ ọrụ ya. Mgbe agbakwunyechara iko mbụ ya na CV, ọ malitere inwe nkwenye ahụ na ọ ga-eme ya. A hapụghị nna Lenglet n'àjà iji hụ na ọrụ nwa ya nwoke ka ga-aga nke ọma. Clement kwuru otu oge banyere nna ya itinye aka na ọrụ ya;
"Nna m nwere ike mee njem 3 oge ụfọdụ n'izu n'etiti Chantilly na ụlọ ezinụlọ m ịkpọrọ m gaa ọzụzụ, gbakwunye egwuregwu nke ngwụsị izu."
Clement maara na iji wee nwee ihe ịga nke ọma, ọ dị mkpa maka inwe nkà na ụzụ n'ime egwuruegwu ya, obere chi wee. Ọ makwaara na ọ chọrọ ohere site na ndị na-ewe ndị ọrụ na klọb buru ibu na nke kachasị mkpa, ịghara inwe mmerụ ahụ. Ndị ahụ bụ okwu nlere anya ya kwụrụ ụgwọ.
Na Chantilly, ndị ọrụ na - achọ ọrụ bịara n'akụkụ nke dị anya na - ahụ maka ndị na - eme egwuregwu kachasị mma ma Lenglet so na ndị a na - ele anya. Mgbe ọ dị afọ 15, ndị na-egwu egwu sitere na Nancy hụrụ ya, klọb nke ndị otu ya dị elu na-egwu na French Ligue 1. Clement Lenglet nwetara ọgbakọ ahụ nke ọma.
Clement Lenglet Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Agụghị Ọmụmụ - Na-ewu ewu Akụkọ
Lenglet bidoro iso Nancy gbaa bọọlụ nke okenye dị ka n'oge ahụ klọb ahụ rachiri na Ligue 2. Ị maara?… O toro site na ọkwa otu, wee bụrụ onye isi na usoro ahụ. Dika onye ndu, o nyeere klọb aka inweta mmeri ya bu Ligue 2 trofi.
Clement Lenglet nyeere ndị otu egwuregwu ibe ya aka merie Ligue 2. Ebe e si nweta Estrepublicain na Youtube
N'ịdabere na klọb ya iji nweta mmeri mbụ ya mere agadi hụrụ ka Lenglet na-enweta ndekọ nke ịghọ onye egwu kachasị ntakịrị na-anọ na Njikọ Njikọ nke 2 kachasị mma. O mekwara ka ya na nnukwu klọb European n'etiti ndị bụ Sevilla gbara ya gburugburu.
Na 4 Jenụwarị 2017, Lenglet kwagara Sevilla FC ebe ọ gara n'ihu na-enwu. Ị maara?… Ọ bụ akụkụ nke akụkụ Sevilla nke debere mpempe akwụkwọ dị ọcha na mmeri ha meriri Man United na asọmpi 2017-2018 Champions League nke 16. Clement Lenglet nyekwara aka na Seville nke Njikọ Njikọ nke Njikọ Europa na 2017.
Ị maara?… Ọrụ Lenglet mere ka ESPN FC tinye ya na Champions League ha kacha mma XI maka oge 2017 / 2018. Ihe ngosi a jidere anya nke FC Barcelona onye tinyere ya dika otu n'ime ihe ndi ozo na mbu ya na windo mbufe 2018.
Clement Lenglet ghọrọ onye ọkpụkpọ 22nd onye French na akụkọ ntolite iji kpuchie agba nke Barça. Mmebi nke Vermaelen na Umtiti nyere Lenglet ohere iji kwuo na ọ ga-agbachitere agbachitere etiti etiti Barca Gerard Pique. Dị ka n'oge edere, a na-ewere ya dị ka atụmanya ogologo oge maka FC Barcelona na ndị otu egwuregwu French. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Clement Lenglet Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Agụghị Ọmụmụ - Ndụ mmekọrịta
N'azụ onye na - eme egwuregwu na-aga nke ọma, enwere enyi nwanyị mara mma na onye mara mma nke Estelle. Ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ maara nke bụ eziokwu na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-abụwanye ihe a na-ahụkarị n'etiti ụmụ nwoke ojii na-eme enyi nwanyị ọcha. Agbanyeghị, ọ bụ ikpe n'etiti Estelle na Clement.
Zute Estelle- Clement Lenglets Nwanyị nwanyị. Ebe e si nweta FC-Barcelona-Internationalcules
Akụkọ ịhụnanya nke Lenglet na Estelle bụ nke na-agbanahụ nlele anya ọha na eze naanị n'ihi na ndụ mmekọrịta ha enweghị ihe nkiri. Ma ndị hụrụ ha n'anya na-enwe a mmekọrịta siri ike nke etinyere na ntọala siri ike na naanị na ọbụbụenyi tinyere ịhụnanya maka ibe.
Clement Lenglets Nwanyị nwanyị - Estelle
N'ịma ikpe site na foto dị nso, ị ga-ekwenye na anyị na onye egwu mara mma dị ka Clement kwesịrị inweta wag mara mma. Ka mmekọrịta ha na-aga, o doro anya na ịlụ di na nwunye nwere ike ịbụ usoro ọzọ maka nnụnụ ịhụnanya abụọ.
Clement na Nwanyị nwanyị Estelle nwere ịhụnanya na ibe ha. Ekele si mesqueunclubgr
ekele agbụrụ agbụrụ, Clement na enyi ya nwanyị ga-abụ ọdịnihu ga-abụ otu n'ime ndị lụrụ di na nwunye nke FC Barcelona na ndị otu mba France.
Clement Lenglet Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Agụghị Ọmụmụ - Ndụ nke Onye
Tomata ndụ onwe onye Clement Lenglet ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ. Bido, Lenglet bụ onye kwenyere na a mụghị ya onye mmeri ma ọ bụ onye mmeri mana o toro ghọọ ya.
Clement bụ onye na-arụsi ọrụ ike nke na-anaghị apụ apụ ma na-eme ihe dị iche na ndị otu egwuregwu. Eric Abidal, onye isi egwuregwu egwuregwu Barcelona dị ka n'oge a na-ede akwụkwọ kwupụtara n'otu oge kwupụtara na ọ hụghị ụdị omume a site n'aka ndị egwuregwu ndị ọzọ. Inggba bọl bụ ihe na-echechi ndụ ya. Nke kachasị, Clement bụ onye na-eche echiche, rie ma na-ehi ụra football.
Ọzọ, n'ihe odide nke aka ya, Lenglet hụrụ n'anya na-atụle onwe ya kwa ụbọchị ma na-akpachapụ anya banyere ịdị ọcha ya n'ihe metụtara iri ya, nna ya, Sebastien kwuru. Clement hụrụ n'anya iri n'ụlọ ma ghara ịga n'ụlọ ebe a na-ere nri ngwa ngwa.
Clement Lenglet- Nnọọ nhọrọ nri ya.
N'ikpeazụ, Clement bụ onye na-ahụghị FC Barcelona dị ka onye kachasị elu na ọrụ ya. Kama, ọ na-ahụ klọb ahụ dị ka ohere iji nweta ihe karịrị nke ahụ.
Clement Lenglet Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Agụghị Ọmụmụ - Ndụ Ezinụlọ
Ezinụlọ Clement Lenglet nọ ugbu a na-erite uru dị n'ịkụnye echiche siri ike n'ime onwe ha. Ọ bụ ezie na ụmụnne ya na-abịa nleta mgbe ụfọdụ ma soro ya biri na ndịda ọdịda anyanwụ Barcelona, ​​ndị nne na nna Lenglet nọgidere karịa na Jouy-sous-Thelle, France.
O nwere ike isiri ndi egwuregwu bọọlụ nsogbu ịla ezumike nká - ma nna Lenglet, Sebastein so na ndị kacha nwee ohere iji gaa n'ihu ibi ndụ nrọ ya site n'aka nwa ya nwoke. Mgbe nna ya gosipụtara nkwado dị ukwuu site na ọrụ ọrụ ya, nne Lenglet na-ebi ndụ enweghị isi dị ala.
N'ihi ihe ịga nke ọma Clement, ọ na-egosi “Ndị ezinụlọ anyị nọ n'igwe ojii, ”Nathan Lenglet- nke nwanne ya nwoke nke obere na-eme ihe ọchị. Obi abụọ adịghị ya, Clement abụrụwo ihe nlereanya nke ụmụnna ya.
Clement Lenglet Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Agụghị Ọmụmụ - Eziokwu nke NdụStyle
Ikpebi n'etiti ịdị mma na ihe ụtọ abụghị nhọrọ siri ike maka Clement Lenglet. Ọ bụ ezie na ịkpata ego bụ ihe ọjọọ dị mkpa, mana Lenglet agaghị echefu ihe ka ukwuu na ya n'ihi ike iji dozie ma hazie ego ha.
Notkaghị igosipụta ụgbọala ndị nwere ntụ, nnukwu ụlọ na uwe ndị mara mma bụ n'ezie ihe ịrịba ama na akụkụ ego nke ndụ ya na-achịkwa.
Clement Lenglet LifeStyle Eziokwu. Ekele diri IG
Clement Lenglet Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Agụghị Ọmụmụ - Eziokwu efu
OKPUKPE: Ọ na-egosi Clement Lenglet bụ okwukwe nke Onye Kraịst. Aha ya etiti bụ Nicolas na-egosi na ọ ga-esite na ezinaụlọ Katọlik ndị nwere ike ife ofufe na Katidral Beauvais.
Ihe omume ndị gbara afọ gara aga: Afọ (1995) mgbe amụrụ ya hụrụ eBay na-aga ndụ na American Epic war film “Brave Obi” na-ahapụ. Ọ bụ n’afọ ọchịchị gọọmentị India nyere aha obodo Bọmbee na Mumbai.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ Clement Lenglet Childhood Facts ya na mgbakwunye Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.